Jery taratra… herinandro : mbola ady tsy vita… | NewsMada
Jery taratra… herinandro : mbola ady tsy vita…
Nifanenjana ny eo anivon’ny firaisamonina sivily ny amin’ny fifidianana izay ho mpikamban’ny Filankevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED). Misy mahatsiaro ho voailika ireo nangataka ho mpifidy na kandikà, mitaky famerenana ny fifidianana.
Noho ny fifanolanana amin’ny fiasan’ny vaomiera manokana mikarakara fifidianana, nanapa-kevitra ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana fa aato ny asan’izany. Misy ny manontany: inona no itsabahan’ny fitondrana amin’ny raharahan’ny samy firaisamonina sivily?
Mbola ady atrehina ny asan-dahalo any atsimo: nananganana vondron-kery manokana, nidina any amin’ny distrikan’i Betroka. Eo koa ny fifanenjanana ny amin’ny “Raharaha Anjozorobe“, tsy fantatra ny marina sy izay hiafarany. Tsy manaiky hatramin’ny farany ny zanak’Androy manana ny maty.
Ady tsy vita koa ny amin’ny “Raharaha andramena” any Singapour. Andrasana ny fitsarana any an-toerana, amin’ny volana ambony. Raha ny eto Madagasikara, nilaza ny Alliance voahary gasy (AVG) fa tsy mahaleo tena ny fitsarana. Nisy fanondranana an-tsokosoko andramena be indrindra ny taona 2014.
Hamonjena ireo tratran’ny kere any atsimo ny vidin’ireo andramena giazina eto an-toerana sy any ivelany, raha ny hevitry ny Fivondronamben’ny tia tanindrazana liam-pivoarana sy ny naman’i Madagasikara ho amin’ny fanovana ifotony (MPMR). Eo koa ny fanavotana ny Jirama, ny Air Madagascar…
Nilaza ny Sefafi fa hisy fanoherana ny volavolan-dalàna momba ny fokontany, raha tsy fidina ny olona hiandraikitra ny fokontany. Tolo-keviny ny hanaovana adihevitra marina ho an’ny vahoaka momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampiharana azy any amin’ny ambaratonga ambanin’ny kaominina.
Mitaky ezaka bebe kokoa amin’ny asan’ny fitondram-panjakana malagasy ny Vondrona eoropeanina, araka ny dinika politika nataon’ny roa tonta. Nilaza ny filoham-pirenena fa efa natomboky ny fitondrana ny fametrahana ny fahamarinan-toerana politika, tsy miandry ny dinika politika. Mbola ady tsy vita…